EyoMdumba 3, 2018 admin
Blockchain ETF yokuqala Canada evunywe nabalawuli
IKomishoni Ontario Securities uluvumile fund Exchange-wasebenza blockchain Canada lokuqala (ETF), Nokubekwa ukuze uqalise kwi Toronto Stock Exchange kwiveki ezayo.
Izikhundla ekuvuneni, inkampani ezimeleyo kulawulo lwe investment Canadian, bafaka wamaphepha lokuqala Blockchain Technologies yayo ETF ngoJanuwari, efuna ukunika abatyali zimali Canadian ithuba bathenge kwicandelo technology blockchain, ngokutsho Globe and Mail.
Le ngxowa-mali iya imali “ngokhuselo equity of benkampani baboniswa, ngqo okanye ngokungathanga ngqo kuphuhliso nokuphunyezwa kwe blockchain kunye technologies zeleja asasazwa,” a Ukuvuna Izikhundla mazwi athi. Le nkampani ufuna ukuba ETF ukulandelela blockchain leeprojekthi zeteknoloji, zibonise yayo Isivuno Blockchain Technologies Index.
Ngokutsho Globe and Mail, amaqela amabini Canadian, Trust First Iipotfoliyo Canada yaye bathungelane Fund Group Inc., Kwakhona sifuna ukuqalisa imali blockchain, kwaye bafaka basenokuba ngabafundi yokuqala kunye nabalawuli kule veki.
Blockchain News 12 EyoMqungu 2018
Post Previous:Double digit Iilahleko ayitshayele Crypto Asset Market
Post Next:Phantom protocol omtsha zikhuphisana ne Lightning Network